Raw Tianeptine Hemisulfate Budada Monohydrate (1224690-84-9) - Phcoker
Sulfate Tianeptine, oo sidoo kale loo yaqaan Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder, waa is ..
Root Tianeptine hemisulfate monohydrate (1224690-84-9) video
Root Tianeptine hemisulfate monohydrate (1224690-84-9) Qalabka
Product Name Root Tianeptine hemisulfate budada monohydrate
Magaca Kiimikada Tianeptine hemisulfate monohydrate; 1224690-84-9; Heptanoic acid,
Fasalka Daroogada Dhexdhexaadinta & Kiimikooyinka Fiican
Molecular Wsideed 1008.004 g / mol
barafku Psaliid 1800 ℃
Karkarinta Psaliid 269.8 ° C at 760 mmHg
Color budada off-White
SOlubility Qodobka la isku-shubo Biyaha iyo methanol iyo dichloromethane
Storage Temperature Goobta la qalajiyey
Application Tianeptine sodium waxaa loo isticmaali karaa qolka Tricyclic oo leh nafsiyan
Tianeptine sodium wuxuu leeyahay shaqeynta anti-boogaha iyo waxyaabo ka hortag ah. Antidepressant
Root Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) budada (1224690-84-9)
Root Tianeptine hemisulfate powdered monohydrate, sidoo kale loo yaqaan Tianeptine Sulfate, waa nooc ka fiicnaaday qaabka cusbada tianeptine sodium. Waa mid aan hygroscopic ahayn, si sahlan loo xakamayn karo, hoos u dhaco, waxayna socotaa laba jeer muddo dheer. Waxay leedahay dhammaan faa'iidooyinka ay ka mid yihiin Tianeptine Sodium, kaliya foomka sulfate wuxuu leeyahay nus saacadood oo ah saacadaha 5-6, sidaas awgeed waxay soconeysaa laba jeer ilaa inta uu ka kooban yahay tianeptine sodium. Sidaa daraadeed, cilmi baarayaashu waxay u baahan doonaan 2-3 jeer cadadka sulfate si loo gaaro natiijooyinka la rabay in ay u yimaadeen inay ka jeclaadaan sodium. Sulfate sidoo kale waa yareyn la'aanta labadaba dhadhanka iyo isdhexgalka.
Tianeptine hemisulfate monohydrate waxaa lagu sifeeyay sidii kor u kiciyaha xayiraadda serotonin (SSRE) ee loo isticmaalo daaweynta niyadjabka. Tianeptine waxaa lagu horumariyay Faransiiska ee 1960s waxaana loo isticmaalay qaybta ugu dambeysa ee 2000s.
Xitaa mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cilladda mindhicirka ee xanuunka ama neefta. Daawooyinka culus waxaa lagu soo waramayaa in ay soo saari karaan saameyn ku yeelashada opioid-sida jimicsiga iyo xayeysiinta, dhiirigelinta dhiirrigelinta, iyo kafateeriga markii la maamulo.
Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) budada (1224690-84-9) Habka Wax-qabadka
Mid ka mid ah qaababka aasaasiga ah ee waxqabadka Tianeptine hemisulfate monohydrate waa in la kordhiyo qaadashada serotonin (5-HT) ee maskaxda iyo platelet. Si ka duwan inta badan xeryahooda tricyclic, Tianeptine uma muuqato inay la xiriirto hoos u dhaca ku yimaada waxqabadka garashada ama shaqada mootada. Waxay umuuqataa inay leedahay waxqabad ku saabsan nidaamka glutamatergic, taas oo loo maleynayo inay tahay farsamooyin lidka ku ah diiqadda.
Marka la kordhiyo qaadashada serotonin, Tianeptine hemisulfate monohydrate waxay leedahay qaab ka soo horjeedda SSRIs dhaqameed. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay baareen saameynta Tianeptine gudaheeda qaab dhismeedka qiyaasta neuroplasticity ee niyad-jabka, taas oo laga yaabo inay waxoogaa dhaqdhaqaaq ah leedahay. Cilmi-baaristii ugu dambeysay ayaa sidoo kale muujisay in Tianeptine ay la macaamili karto adenosine A1 receptors.
Intaa waxa dheer, cilmi-baaris dhowaan lagu daabacay 2014 waxa ay soo jeedinaysaa in Tianeptin uu u dhaqmi karo sidii mareegtada m -opioid (MOR) agonist. Cilmi-baadhayaashu waxay adeegsadeen qalabka xakameynaya iyo baaritaano ku salaysan unugyada ku salaysan si loo aqoonsado Tianeptine oo ah MON agonist. Sidoo kale waa gabi ahaanba d-opioid agonist laakiin waa mid aad u hooseeya. Tianeptine wuxuu ahaa mid aan waxtarka lahayn ee goobaha lagu daaweeyo k-opioid.
Isticmaal of Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) budada (1224690-84-9)
Disorder Cillad jahwareer leh
Walaaca ladagaalanka iyo niyadjabka iyo sifooyinka nootropic
Performance Waxqabadka garashada iyo kor u qaadista awooda barashada
Cle Murqo xanuun
Soo-jeedinta Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) (1224690-84-9) Qiyaasta
Qiyaasta 'monoisulrate' ee loo yaqaan 'Tianeptine hemisulfate monohydrate' caadi ahaan waa 25 mg hal mar, ama laba jeer maalintii. Xitaa markaad ku bilaabeyso qiyaasta hoose, waxaa fiican inaad ku xaddido 2 ama 3 maalmood usbuucii ugu yaraan 3 - 4 maalmood dhexdooda.
Tianeptine hemisulfate monohydrate wuxuu ku yimaadaa kaabsol ama qaab budo ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo qadar yar oo aad ku kordhiso qadar yar ilaa inta qiyaasta saxda ah laga gaarayo. Intaa waxaa sii dheer, qiyaaso yar ayaa yareynaya suurtagalnimada qabatinka, ka bixitaanka daran, iyo dulqaadka.
Qiyaasaha 50 - 75 mg ayaa kicin kara. Qiyaasta madadaalada ee 'Tianeptine hemisulfate monohydrate of> 100 mg waxay sababi kartaa Tianeptine hemisulfate monohydrate dareen sare.
Waxtarrada Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) budada (1224690-84-9)
Ian Tianeptine hemisulfate monohydrate wuxuu hagaajiyaa neuroplastic-ka maskaxda wuxuuna yareeyaa niyadjabka. Neuroplasticity-ka waa awooda maskaxda ee la qabsiga iyo isbedelka markay baraneyso; gacan ka geysata waxqabadka garashada wanaagsan iyo kobcinta awoodda barashada.
♦ Daraasad lagu sameeyay 90 bukaan oo qaba PTSD ayaa muujisay natiijooyin wax ku ool ah iyadoo la adeegsanayo isticmaalka Tianeptine hemisulfate monohydrate. Daraasaduhu waxay sidoo kale muujiyeen in daaweynta tianeptine sulfate iyo hoos u dhac weyn ee khalkhalka argagaxa. Tianeptine hemisulfate monohydrate oo la siiyo bukaanka waayeelka ah ayaa muujisay inay wanaajineyso shaqada neerfaha ee maskaxda iyo xoojinta niyadda.
♦ Daraasaadka xayawaanka iyo bini-aadamka ayaa lagu sameeyay daaweynta cudurka Parkinson ee leh Tianeptine hemisulfate monohydrate, oo muujinaya natiijooyin rajo leh oo lagu hagaajinayo dhibcaha caafimaadka maskaxda.
Study Daraasad horudhac ah oo laga sameeyay 68 bukaan socodka bukaan socodka ah oo qaba ADHD ayaa lagu soo gabagabeeyay in dhibcaha celceliska ay si aad ah u fiicnaadeen iyo in Tianeptine hemisulfate monohydrate ay faa iido u leedahay awood siinta awoodaha feejignaanta wanaagsan iyo hoos u dhaca dabeecadaha kacsiga leh.
Ian Tianeptine hemisulfate monohydrate sidoo kale waa xanuun joojiyaha waxtar u leh (xanuun baabi'iye), xitaa shaqsiyaadka la xanuunsanaya xanuunka daba dheeraada. Waa hab wax ku ool ah oo loogu talagalay yareynta calaamadaha la xiriira arrimaha caafimaadka xiidmaha sidoo kale.
Institute Machadka Daawada Tijaabada ee ku taal Caracas wuxuu sameeyay 52-wiig oo tijaabo ah oo loogu talagalay carruurta qaba cudurka neefta. Bukaannada ay maamulaan Tianeptine hemisulfate monohydrate waxay muujiyeen koror weyn oo shaqada sanbabada.
♦ Inkastoo cilmi baaris dheeraad ah loo baahan yahay, baaritaanka ragga 237 ee ED ay go'aamisay in tianeptin uu noqon karo daaweyn wax ku ool ah.
♦ Dhibaatooyinka 'Tianeptine'ka' ee saameyn aan walwal lahayn ma saameyn karaan asetilkololin ama shaqeyn wadnaha, sameynta tianeptine si aad u fiican oo loogu talagalay waayeelka iyo sidoo kale